Somaliland oo war ka soo saartay weriyaasha ‘baxsadka uga maqan’ – Hornafrik Media Network
Somaliland ayaa ka hadashay Weriyaasha ka tagay deegaanadeeda ee sheegay inay baxsad ka yihiin caburin iyo xarig ay kala kulmaan xukuumada uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Somaliland ayaa sheegtay inay cid kasta ee u gefta shuruucdeeda, isla markaana dembi ka gasha bulshada iyo qarankaba ay la tiigsaneyso sharciga, sidaasna ay ku muteysa doonaan ciqaabta falka uu ku kaco ruuxa muwaadinka ah.
Wasiirka warfaafinta Somaliland, Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo arrinkaasi ka hadlay ayaa sheegay in warbaahinta looga baahan yahay inay ka shaqeyso nabadda, isla markaana ay ixtirmaato shuruucda Somaliland iyo madaxbanaanideeda.
Wasiir Saleebaan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Weriyaha reer Somaliland ah uu dambi ka gali karo dadka reer Somaliland iyo qaranimadeeda, markaasna dembiga uu galay loo raacayo sida sharciga uu dhigayo.
Wasiirka oo si aad ah uga gaabsaneyay Su’aal laga weydiiyay arrinkaasi ayaa waxa uu yiri “Anagu marka aanu nahay golaha wasiirrada ama ka Wasiir warfaafin ahaan waxaan ka wakiil ahay dhamaan umada reer Somaliland, waxaana laga yaaba qofkii Weriyiha ahaa uu dadka reer Somaliland dambi ka galo, aniguna waxaan wakiil ka ahay dadkaasi reer Somaliland ee dambiga laga galayo marka taasi waxay igu khasbaysaa inaan dadka u dhaxeeyo”.
Isagoo sii hadlayey wasiirku ayuu yiri, “Wax kasta waa laga wada-hadlayaa sharci baanu dalku leeyahay hadii ay aniga ama qof kale sharciga ku gafana oo umadda reer Somaliland iyo madax banaanideeda meel looga dhacana waa dembi qofkii galena waa loo raacanayaa”.
Wasiirka Warfaafinta ayaa ugu dambeyntiin waxa uu sheegay inuusan awood u laheyn in uu fara galiyo ama ka hadlo dacwadaha Maxkamaddaha ku jira ee ka dhanka ah Weriyaasha uu Wasiirka u yahay, haddii ay khalad galaan ama laga qaldamo.